Lapid wuxuu yidhi Lamaanaha lagu xidhay Turkigu ka mid ahayn hay'adaha Israa'iil. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Lapid wuxuu yidhi Lamaanaha lagu xidhay Turkigu ka mid ahayn hay’adaha Israa’iil.
Lapid wuxuu yidhi Lamaanaha lagu xidhay Turkigu ka mid ahayn hay’adaha Israa’iil.
Ka dib markii Turkigu ku eedeeyay basaasnimo Jimcihii laba dalxiisayaal Israa’iili ah, xafiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Israa’iil Yair Lapid ayaa soo saaray bayaan uu ku adkaysanayo in aan lamaanahaasi marnaba u shaqayn hay’ad kasta oo Israa’iil ah.”
Lapid wuxuu la hadlay qoyska lammaanaha wuxuuna u xaqiijiyay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa’iil ay dalbatay booqasho qunsuliyadeed oo degdeg ah ayna “ku dhaqmayso dhammaan heerarka kala duwan si loo hubiyo siideyntooda,” ayuu xafiisku ku daray.
Lammaanahan oo ay warbaahinta Israa’iil ku magacawday Mordy iyo Natali Oknin, ayaa la horgeeyey maxkamadda Istanbul horraantii Jimcihii, halkaas oo xaakimku uu ku soo eedeeyey “basaasnimo siyaasadeed iyo mid milatari”, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dawladda Turkiga ee Anadolu.
Dadkaan ayaa la xiray Khamiistii iyagoo sawiro ka qaaday guriga uu Istanbul ka degan yahay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
“Waxay ahayd fal aan waxba lagu galabsan oo lagu sameeyey niyad wanaag, dalxiis ahaan, ee ma ahayn fal ‘dambi’ ah oo fasaxaya falkan xadgudubka ah ee xadhigga ah,” qareenka lammaanaha Nir Yaslovitzh ayaa warqad u diray Lapid, sida laga soo xigtay warsidaha reer binu Israa’ii ee Times.
Xadhiga ayaa ku soo beegmaya saddex toddobaad kadib markii Turkiga uu ku dhawaaqay in uu jebiyey shabakad ay ku xidhnaayeen sirdoonka Mossad ee dalkaasi ka howlgelayey. Ugu yaraan 15 qof oo la sheegay inay u shaqaynayeen sirdoonka Israa’iil ayaa waxaa xidhay ciidamada ammaanka ee Turkiga.
Previous articleIran waxay diyaar u tahay ‘heshiis kasta oo wanaagsan’ oo wadahadalada nukliyeerka laga gaadho
Next articleQadar ayaa danaha Mareykanka ee Afgaanistaan maarayn doonta sida uu yidhi Blinken.